Soo dejisan Teamviewer 15.3.49 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Teamviewer
TeamViewer – software ah helitaanka fog fog si Windows, Mac, ama Linux ah kombiyuutarada. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan maamulka dhamaystiran iyo maarayn dukumentiyada jira ama codsiyada. TeamViewer taageertaa gacanta fudud ee computer ka fog adigoo isticmaalaya keyboard ka dhisay-in la furayaasha adeegga iyo set of multi-taabto si ay u qabtaan falalka loo baahdo. software waa awood si ay u gudbiyaan warbaahinta files, waraaqaha iyo archives labada dhinacba. TeamViewer isticmaalaa tallaabooyinka ammaanka adag si ay u helaan in ay computer ka fog iyo dhawri sirta macluumaadka shakhsiga ah.
Helitaanka kombiyuutarada ilaaliyo by firewalls ama wakiil
Transfer of files labada dhinacba
tallaabooyin ammaanka oo sareeya
Soo dejisan Teamviewer
Faallo ku saabsan Teamviewer
Teamviewer Xirfadaha la xiriira
An fudud in la isticmaalo software si ay u maareeyaan shabakadaha WiFi ah. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda ka mid ah shabakadaha laga heli karo.
software ah ee ay gacanta ku fog of computer by hab of smartphone. software waa ay awoodaan in ay si buuxda u jilo hawlaha mouse iyo keyboard.
Software dhameystiran si ay u maareeyaan shabakada dalwaddii gaarka loo leeyahay. Codsiga bixisaa ilaalinta xogta shakhsiga ah iyo sirta ah ee channels wareejinta macluumaadka lagu jiro isticmaalka Wi-Fi.
Hola – softiweer u gudbiya xayiraada gobolka ee kheyraadka websaydhka isla markaana qariya cinwaanka IP-ga ee dhabta ah ee joogitaanka qarsoon ee internetka.